म त बुढी मान्छे । धेरै बर्ष बितेछन् । नागरिकता बाँड्ने बेला उमेर घटाइदेछन् । नत्र त ९० सालको भूकम्प जाँदा म ५ बर्षकी थिएँ । जीवन पूरै बितिसक्यो । बाल्यकाल देखि आजसम्म संसार धेरै नियालियो । बालबच्चा भए । नातिनातिना पनि भए । घर गृहस्थीको सबै कर्म गरिसकेँ । अक्षर भने लुकी लुकी कपुरी “क “सम्म चिनेकी थिएँ । अहिलेजस्तो पढ्न त कहाँ पाइन्थ्यो र । अहिले जवानी सकिनेबेलासम्म पढिरहनुपर्ने ! मेरो नातिनीको उमेरमा पछ्यौरामा बच्चा बोकेर घाँस काट्थेँ । ति दिन गए। संसारले धेरै फड्को मारेछ । कहिल्यै बिरामी परेको थिएन
आज मनिटरका कर्कश आवाजका बीचमा अन्तिम दिनहरु पर्खेर बसेकी छु । बेड त गजबको छ । कमलो लचकदार बेड । न्यानो कोठा । तर जस्तो सुबिधा भएपनि ज्यानलाई सुबिस्ता भने छैन । हातैभरी निलडाम मात्रै । सुइले नचुमेका नशा कुनै बाँकी छैनन् शायद । कति तीखा सुइ । च्वास्स पार्ने । फेरि सुइ तीखो नभए इन्जेक्सन नशाभित्र कसरी पुग्ला र । रगत जाँच गर्दागर्दै शरीरको रगत नै रित्तियो जस्तो लाग्छ । र भन्छु ” ए नानी । रगत सकियो बा मेरो । ननिकाले हुन्न र “ उत्तर त सबैको उही हुन्छ ” रगत शरीरले बनाइहाल्छ नि । रित्तिन्न । चिन्ता नलिनु ।आमा । “ तर मेरो सोझो हिसाबले त्यो सुइभरी निकालेको रगत कहाँ कता बनेर नशामा निस्कने रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन । । रगत पैँचो लगेपछि रगत चढाउनुपर्ने नि। तर पर्दैन भन्छन् सिस्टर नानीले ! हरेक दिन रगत जाँच्न लगिरहन्छन् । रोग पत्ता लगाउन रगत जाँच गरेको रे । पहिले जस्तो नाडी छामेर पत्तो पाउने रहेनछन् अचेलका डाक्टरले !
दमको रोगले च्यापेको छ रे मलाई । मुटु पनि कमजोर भएको छ । शरीर सुन्निएको त्यसैले हो रे । अली अली म्रिगौलामा पनि असर पुगेको छ रे । अवस्था गार्हो नै छ रे । मैले सुन्छु कि भनेर ढोका बाहिर भनेका डाक्टरले । मैले थाहा पाउँदिन कि भनेर । निभ्न लागेको बत्ती निभ्नु भन्दा अगाडि टाठो बल्छ । मेरा कानले भने अझै साथ छोडेका छैनन् भन्ने के थाहा । त्यसैले छट्पटी हुन्छ मलाई । भागूम जस्तो लाग्छ । शरीर कमजोर छ । नाकमुखमा अक्सिजन लगाएका छन् । बेलाबेलामा अप्ठेरो हुन्छ । र निकाल्न खोज्छु । नर्स नानीहरु पहरा नै दिएर बसेका हुन्छन् । उनीहरु आउँछन् र फेरी लगाइदिन्छन् । यो दोहोरी चलिरहन्छ । खै किन हो यति सार्है माया गरेका । धेरै बाँचेर पनि के गर्नु थियो र मलाई । अक्सिजनको मूल्य धेरै रहेछ । बाँच्नलाई पनि र खर्चमा पनि। घरमा अक्सिजन नराखी त मलाई घर लैजान सकिन्न रे । त्यो गाउँमा कसरी पुर्याउने होला । मेरा गाउँमा रुखले अक्सिजन नदिनेरहेछन् र भनेर सोधेको त डाक्तर बाबु हाँस्दै थिए । नातिले एक दिन पढेको सुनेकी थिएँ “ बाँच्नलाई अक्सिजन चाहिन्छ । रुखले अक्सिजन प्रदान गर्छन् ” । सहरतिरका रुखले मात्रै अक्सिजन दिने रहेछ क्यार ! एक दिन बिहान डाक्टरले घरमा १६ घण्टा अक्सिजन लगाएर बस्नुपर्छ भनेको सुनेँ । अरु बेला अप्ठेरो लागेर फुकालिदिन्थे अक्सिजनको मास्क । त्यो सुनेको दिन म पुरै ज्ञानी बनेर लगाएँ । ६ महिनालाई अक्सिजन यतैबाट पुग्छ कि भनेर !
बेलाबेला श्वास बढ्छ मेरो । श्वास लिन गार्हो हुन्छ । बाहिरै घ्यार्घ्यार आवाज सुनिन्छ । प्राण जान्छ कि जस्तो हुन्छ । एउटा ठिटो डाक्टर अाइपुग्छन् । देख्दा आफ्नै नातिको जस्तो झझल्को आउने । आला लगाएर सुन्छन् । र केही औषधी दिन भन्छन् । त्यो ओक्तोले केही समय काम गर्छ । हल्का भएजस्तो हुन्छ । यो प्रकृया दोहोरिरहन्छ । रोगसँग लड्दै गर्छ मेरो शरीर । मनले त दु:ख नपाउन सजिलो अवसानको कल्पना गरिरहन्छ । निलडाम नभएको कुनै ठाउँ छैन । सुन्निएका खुट्टा र हात बिस्तारै चाउरिएका छन् । पिसाब पनि कति बिधि लाग्ने रैछ । औषधीले गर्दा होला । पानी फेरी खानै नदिने । मुख सुकेर भिजाइदिन्छन् बेला बेला । तर तिर्खा त मेटिन्न । मुटु कमजोर भएकोले पानी धेरै भएर शरीर फुल्छ भनेर नदिने भन्छन् । कस्तो रोग लागेछ ! पानी पनि खान नपाइने । डाक्तरले गाली मात्रै गर्छन् पानी लुकेर खाएको होला भनेर । बोत्तल पनि नजिकै राख्न दिएनन् ।
वरिपरी हेर्दा पनि माया लागेर आउँछ । भर्खरको नयाँ ठिटो आफ्नो अगाडिको बेडमा देखेँ । अघिल्लो दिन अर्कै बिरामी देखेकी थिएँ त्यो बेडमा । राती गार्हो भएर एक हूल सेता कोटहरु जम्मा भएका थिए । बिचरा ती नानीका बाबुले कति माया गर्थे । अहिलेको बाबुलाई भने किड्नीको समस्या रहेछ । बिहान एक जना पाको देखिने डाक्टरको कुराबाट ठम्याएकी मैले । त्यो बाबुलाई रातभरी ठाडै बस्नुपर्ने । खोकी पनि उस्तै सार्हो । सानो उमेरमा के लागेछ त्यस्तो रोग ! मलाई पनि अली अलि सजिलो हुन्छ । अनी फेरी च्यापिरहन्छ । दु:ख दिने चक्रिय नियम होला भगवानको । सजिलै भगवानको घर जान पाए हुने जस्तो लाग्छ ।
एकदमै सास्ती भयो । सजिलो उपाय छैन बाबु भनेर सोध्छु डाक्टरलाई । मेरो आयु पनि त्यो कलिला उमेरका बाबुलाई दिन पाएको भए जाती हुन्थ्यो भन्ने तर्कना गर्छु । “ ठीक हुन्छ आमा ठीक हुन्छ । नाअत्तिनुस् । “ भनेर भन्छन् डाक्टर बाबु र सिस्टर नानी । म भन्छु ” डाक्टर बाबु । तिमी आफ्नो काम गर । दुई चार दिन अलि सजिलो बनाउने प्रयास गर । तर म अब चाँडै बिदावारी माग्दै छु । त्यसपछि भगवानलाई म सोध्नेछु ” रोग किन लाग्छ ? “
( एक दमको रोगीसँग ICU मा उपचारको क्रममा देखेका मनोभावको चित्रण गर्ने असफल प्रयास गर्दै छु )